Enda, kirarom-pihazakazahana voalohany avy ao Kenya manantena ny hahomby amin’ny sehatry ny fanatanjahantena manerantany · Global Voices teny Malagasy
Foiben-dalan'ny hazakazaka manerantany i Kenya
Voadika ny 19 Janoary 2022 14:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Nederlands, English
Tompon'ny sary: Enda (Nahazoana alalana)
Ho an'ny firenena malaza amin'ireo mpihazakazaka lavitr'ezaka nahombiazana, fotoana izao raha miainga ao Kenya ny marika kiraro fihazakazahana vita ao an-toerana. Orinasa Kenyana mpisava lalana amin'ny fanaovana fitafiana ara-panatanjahantena ny Enda ary manantena ny ho marika kiraro afrikana malaza voalohany tahaka ny Adidas, Nike, ary Puma hahazoany vola. Enda dia midika hoe “Andao!” amin'ny teny Swahili.
Tamin'ny Desambra 2021, nahangona iray tapitrisa dôlara US tao amin'ny fanangonam-bola Series A ho an'ny ainga fananganana fihariana (start-ups) avy amin'ny Talanton, orinasam-pampiasam-bola amerikana, ahafahan'ny Enda manitatra ny marika hanerantany amin'ny alalan'ny ezaka fampitomboana ny vokatra sy ny fitsinjarana azy.
Navalayo Osembo Filoha Tale Jeneraliny amin'izao fotoana sy Weldon Kennedy, mpikatroka ara-tsosialy sady mpankafy kiraro fihazakazahana no nanorina ny Enda tamin'ny taona 2016. Raha jerena ny lazan'ny fihazakazahana eo amin'ny Kenyana maro, indrindra ireo avy amin'ny Lohasahan'i Rift, dia nahita hantsana teo amin'ny tsenan'ny kiraro ao antoerana i Ossembo ary nitady ny hanentsina azy io
Nivoaka tamin'ny taona 2017 ny Iten, andian-kiraro voalohany, nalaina avy amin'ny anaran-tanàna malaza iray tao amin'ny lohasahan'i Rift any Kenya ka ny fokonolona Kalenjin namoaka ireo mahery mihazakazaka indrindra eran'izao tontolo izao no betsaka monina ao. Io fokonolona io no manana atleta mpanao hazakazaka lavitr'ezaka be indrindra any Kenya. Novolavolaina tamin'ny ezaka fanangonam-bola, ​​izay nanintona mpandray anjara arivo mahery ny kiraro Iten. Nahangona vola mihoatra ny 120.000 dôlara US ry zareo raha 75.000 dôlara US no tanjona voalohany tao amin'ny sehatra fanangonam-bola Kickstarter.
Novolavolaina taorian'ny 18 volana nanaovana fikarohana sy ny fitsapana maharitra ny andiany faharoa, ny Lapatet, tamin'ny taona 2019. Lapatet no anarana Kalenjin midika hoe “mihazakazaka.” Novolavolaina manokana hampidirana ny lafiny iray amin'i Kenya na ireo fokonolona eo an-toerana ny andian-kiraro tsirairay, toy ny endrika fitafiana eo an-toerana (kitenge sy kikoys) sy ny loko (mainty, ny fotsy ary ny maitso ny sainam-pirenena kenyana).
Na dia mbola tsy fantatry ny ankamaroan'ny Kenyana aza, dia nitombo ny marika ary mampiasa olona 100 mahery izao amin'ny zotra famokarana ao Kilifi, any Kenya amorontsiraka. Ampiasainy ihany koa ny fahafaha-mamokatra avy amin'ny mpanamboatra kiraro miorina ao an-toerana izay namokatra kiraro fingotra ny tetibolany tamin'ny voalohany.
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny AfroTech, nilaza ilay teraka Kenyana Navalayo Osembo fa nahazo aingam-panahy hamorona ny marika satria ny kiraro enti-mihazakazaka no fitafiana zava-dehibe indrindra ara-bola sy ara-kolontsaina ho an'ny mpankafy matihanina sy ny manao azy ho fialam-boly. Herintaona teo ho eo no lany hamoronana santionan-kiraro iray, ary ny fampiasana ireo ho porofon'ny tsirinkevitra, nanokatra fanentanana Kickstarter izy ary nanomboka ny famokarana ho an'ny daholobe tamin'ny taona 2016.
Tamin'ny tapaky ny taona 2021, niara-niasa tamin'ny orinasa mpamokatra labiera tao an-toerana ny orinasa mba hamokatra marika fanofanana hazakazaka izay hampitiavan'ny vahoaka azy amin'ny ankapobeny, hanohana ny orinasa eo an-toerana, ary hanome voninahitra ireo atleta Kenya ity orinasa ity. Natao izany ho fankasitrahana ny zavabitan'ny ekipa Olaimpika an'i Kenya nandritra ny Lalao Olaimpika tany Tokyo. Nanamarika koa i Osembo fa fiaraha-miasa amin'ireo marika eo an-toerana mamaky ny sehatra manerantany ary lasa ekena ho ampahany amin'ny kolontsaina Kenyana izany..
Nanatevin-daharana ireo ainga fanombohana ara-teknolojia, fambolena, sy fitaterana ara-bola izy io, ary ny fitaterana izay nahasarika ny kapitalista nanerana an'izao tontolo izao. Tanjon'ny orinasa ny hamokatra mpampiofan-davitra isan'andro sy andian-kiraro ho an'ny [hazakazaka] fohy ezaka amin'ny fampiasana fitaovana nalaina eo an-toerana ihany.
Antontanisa avy amin'ny RunRepeat no nanondro fa nitombo eran-tany nandritra ny folo taona lasa izay ny fihazakazahana, misy fitomboana 57 isanjato ny lazany. Tao anatin'ny roa taona, tao anaty fikatonana sy ny fameperana ny fivezivezena noho ny valan'aretina Covid-19, iray amin'ireo fironana lehibe indrindra hitaizana vatana tamin'ny taona 2021 ny fihazakazahana, satria nandingana ny lalana fanavotana amin'ny rarintsaina ireo sambany mpihazakazaka. Izany no mametraka ny kiraro fihazakazahan'i Enda ho lohalaharana. Noho ny kinendriny hanitatra mihoatra ireo atleta sangany izay nampitombo ny lalam-panazarantena ao Kenya, tadiavin'ny Enda dia hiitatra mankany amin'ny sehatra fihazakazahana ho fialamboly izay nitombo be tao Kenya sy manerantany.
Mino ny ekipa ao amin'ny Enda fa ny fihazakazahana dia mety mihoatra noho ny fomba iray fotsiny hanatsarana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina. Azo ampiasaina ihany koa izany hifantohana amin'ny olana ara-tsosialy toy ny hitsiny, ny rariny ary ny fitoviana tsy ao Kenya fotsiny fa manerana izao tontolo izao. Tamin'ny alàlan'ny fiantraikany ara-tsosialy tsara ananan'ny marika, manantena ny Enda hamaky ny fitaratra ka ho lasa marika kiraro lohalaharana avy eto Afrika.